5 Akanakisa Social Media Management Apps muna 2020 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mobile Apps, Social Media, pasocial media apps, Social Media Marketing, Yemagariro Midhiya Strategic
5 Yakanakisa Yemagariro Media Management Mapurogiramu muna 2020
evanhu vezvenhau yashanduka kuita chiitiko mumakore gumi apfuura. Vanoshandisawo evanhu vezvenhau maturusi ekukura, sezvavanovabatsira zvakanyanya mukutsvaga kwavo kukwezva vateveri vazhinji kureva vatengi. Mumwe muenzaniso wekushandisa zvishandiso izvi mukana wekutenga zvinofarirwa. Mabhizinesi anogona kutenga likes zvisinei evanhu vezvenhau chikuva chavari kushandisa, vanongoda kuve nechokwadi chekuti saiti yavari kushandisa yakachengeteka uye ndeyechokwadi. The Small Business Blog inoongorora iyo nzvimbo dzakanakisa dzekutenga TikTok likes, uye kusarudza pane imwe zviri nyore chinhu chakanakisa chaungaita nezvekukura kwako. Zvisinei, kutarisira evanhu vezvenhau zvehunyanzvi zvinangwa zvakasiyana uye zvakaomarara kupfuura zvakajairwa evanhu vezvenhau mashandisirwo. Ndokusaka vanhu vachitora rubatsiro kubva social media automation maturusi. Heano mashanu ezvakanakisa maturusi aunofanirwa kunge uchifunga nezveako evanhu vezvenhau.
PromoRepublic is a evanhu vezvenhau manejimendi chishandiso chakatangwa muna 2014. Masevhisi PromoRepublic anopa ndeaya zvakasikwa zvemukati, kutsikisa, uye analytics.
For zvakasikwa zvemukati, PromoRepublic inopa akafanogadzirirwa matemplate ayo anogona kushandiswa kune akasiyana marudzi ezvinyorwa. Zvimwe kunze kwetemplate, iwe unowana stock mifananidzo, mavhidhiyo, uye ma gifs kune ako zvemukati.
Kuti utsikise, unogona kubata akawanda evanhu vezvenhau Mapuratifomu uye maakaundi kubva kuPromoRepublic's dashboard. Iyo zvakare inoratidzira post-kuronga ine akawanda sarudzo. Kubva pakarenda yayo yemukati, unogona kuronga zviri nyore zvemukati zvinodarika mwedzi pamberi.
For analytics, zvakasiyana-siyana zvinokuita kuti udzidze kusvika kwezviri mukati mako pamwe nekutambira.
Huwandu hwemaprofiles uye ekuongorora zvinhu zvinosiyana kubva pakuronga kuronga izvo zvinotsanangurwa zvakadzama pawebhusaiti yepamutemo. Pane zvirongwa zvina zvokusarudza kubva; solo ($ 9), standard ($ 49), nyanzvi ($ 99), uye Enterprise. Enterprise zvirongwa hazvina mitengo yakatarwa uye zvinoenderana nenhamba yemasevhisi aunotenga. Unogona kuyedza yemahara muedzo kune chero ehurongwa pasina kupa chero kiredhiti kana kiredhiti kadhi.
Hootsuite ndeimwe yekare evanhu vezvenhau manejimendi zvishandiso zvatinoziva nhasi. Yakatangwa muna 2008 uye nhasi ine vashandisi vanopfuura mamirioni gumi nematanhatu.
Hootsuite inokupa iwe dashboard yekubata zvakasiyana evanhu vezvenhau maakaundi akasiyana Mapuratifomu. Iwe unogona kutumira nemaoko kana kuronga zvinyorwa pane zvakasiyana Mapuratifomu kubva panzvimbo imwe chete. Haufanire kushandura pakati peakaundi kana kutumira zvirimo nemawoko nguva nenguva. Kubva padashboard, unogona zvakare kugadzirisa mhinduro dzevatengi kubva mumainbox emaprofiles ako ese. Iwe unogona kuverenga nekupindura kune ese emibvunzo papuratifomu yega yega kubva pane ino peji.
Iko kune yeComposer ficha iyo inokupa iwe kuwana kune zvemukati raibhurari yemapikicha, mavhidhiyo, uye zvipo zvinogona kushandiswa zvakasikwa zvemukati.
Nezvinangwa zvekuongorora, pane Hootsuite Insights. Heano a kuongororwa kwakadzama kweHootsuite
Kunze kwechirongwa chemahara, kune huwandu hwezvirongwa zvina zvakabhadharwa; Nyanzvi ($19), Chikwata ($99), Business ($ 599), uye Enterprise. Hootsuite inopa yemahara kuyedzwa kwemazuva makumi matatu kune chero ehurongwa hwayo. Hapana kiredhiti / kadhi kadhi ruzivo runodikanwa.
AgoraPulse yakavambwa kare muna 2001 apo yaizivikanwa seAffinitiz. Ndiyo yekare zvikuru evanhu vezvenhau manejimendi chishandiso pane iyi runyorwa. Parizvino, kune vanopfuura 23k vanhu vanoshingairira kushandisa AgoraPulse.
AgoraPulse inokupa iwe yakajairika dhibhodhi maneja ako ese profiles kubva. Kuwanda kwemaprofiles kunoenderana nechirongwa chawasarudza. Iwe unogona kutumira nemaoko kana kuronga pamberi pechimwe chikuva kubva pane peji rimwe chete. Iyo zvakare inokupa iwe yakagovaniswa inbox uko iwe kwaunogona maneja evatengi mhinduro kubva kune ako ese maprofiles kubva panzvimbo imwechete Bhokisi reinbox raAgoraPulse rine firita iyo inogona kuona spam uye chatbots uye kuzvichengeta kunze. Inochengetedza yakawanda nguva, kushanda nesimba uye nemusoro
Kunze kweizvi, neAgoraPulse unogona kuona nguva dzese kana zita rechiratidzo chako rikaiswa kana kutaurwa chero papi. evanhu vezvenhau. Inokupawo mazano ekuti unofamba nemisoro uye ma tag anogona kuita kuti zvemukati zvisvike kune vakawanda vateereri.
Pane zvirongwa zvina zvakasiyana zvekusarudza kubva; Pakati ($ 4), Huru ($ 79), X-Huru ($ 179), uye Enterprise. Usati watenga chero chirongwa, vashandisi vanogona kuedza kwavo-kwemazuva makumi maviri-emahara kuyedzwa kutanga. Iko hakuna kuzvipira uye ivo havakumbire kune yemunhu kiredhiti kiredhiti kana kiredhiti kadhi ruzivo.
Chimwe chezvishandiso zvitsva pane iyi runyorwa, Loomly yakavambwa muna 2016. Inonzi Calendy pakutanga, yakapihwa zita rekuti Loomly muna 2017.
Sezvizhinji zvezvishandiso zvakadaro, Loomly inokutendera kuti utore zvese zvako evanhu vezvenhau profiles kubva papeji imwe chete. Iwe unogona kutumira zvirimo pasina kuchinja tab uye kugara uchingopinda nekubuda. Nhamba ye evanhu vezvenhau maakaundi aunogona kubatana nawo uye nhamba yevashandisi vanogona kuishandisa zvinoenderana nechirongwa chakasarudzwa.
Kune zvakare yakajairika inbox uko iwe kwaunogona kuona mhinduro dzese dzaunogashira pane ese akabatanidzwa profiles. Mhinduro yevatengi ndiyo yakanyanya kukosha chikamu chekushambadzira uye kuve neakagovaniswa inbox inove nechokwadi kuti hauzombopotsa pane chero mibvunzo kana zvichemo.
Loomly inopa rubatsiro rwakakura mukushambadzira kunyanya. Iyo inoratidza inopisa misoro uye mafambiro epositi yako ayo anogona kusimudzira kusvika kwavo. Kune zvakare ad-maneja iyo inokubatsira iwe kuramba uchienderana neshambadziro dzako kune akasiyana akasiyana akabatana profiles.
Iko hakuna rwemahara chirongwa uye iwe unogona kusarudza kubva kune mashanu zvirongwa; Base ($ 34), Standard ($ 76), Yepamberi ($ 119), Premium ($ 332), uye Enterprise. Loomly inopa 15-mazuva emahara muedzo kune vashandisi kuti vaongorore uye vazvisarudzire vega.
5. Sked Yemagariro
Yakavambwa muna 2013, Sked Social yanga iri zita rine mukurumbira kwemakore manomwe. Sked Social ndiyo yakanakisa maneja manejimendi chishandiso kana uchisimudzira yako Instagram ndiyo inonyanya kunangwa sezvo inoshanda zvakanyanya kune Instagram. Muchokwadi, Sked Social yaimbove yakasarudzika Instagram uye yaimbozivikanwa seSchedugram. Chimwe chezvinhu zvikuru pano ndeche Instagram post schedule. Izvo zvinosanganisira kwete chete kutumira mifananidzo nemavhidhiyo pane yako feed asi pane nyaya zvakare. Iwe unogona kuronga mameseji akawanda panguva dzakasiyana izvo zvinoita kuti manejimendi ave nyore.
Iko kune yakavakirwa-mukati mupepeti paSked Yemagariro iyo iwe yaunogona-naka-tune mapikicha uye mavhidhiyo chaipo usati waatumira iwo. Sarudzo yekutarisa mbichana usati watumira inowanikwa zvakare iyo inoita kuti iwe uone kuti zvemukati zvako zvaizoratidzika sei papuratifomu yakambotumirwa
Iwe unogona zvakare kutonga zvimwe evanhu vezvenhau Mapuratifomu se Facebook & Linkedin asi inoshanda zvakanyanya kune Instagram.
Pane zvirongwa zvina zvaunogona kusarudza; Base ($25), Essentials ($75), Professional ($135), uye Enterprise ($260). Iwe unogona zvakare kusarudza yemazuva manomwe-yemahara muyedzo usati watenga chirongwa zvakare.
evanhu vezvenhau manejimendi anyatso kushanduka kuita hunyanzvi uye mabhureki nemafemu ave kuhaya nyanzvi kuti dzigadzirise evanhu vezvenhau profiles. Kuigadzirisa hakusi kufamba mupaki uye zvakare hakusi kubudirira ipapo. Izvo zvinoenderana nehutano hwechigadzirwa chako pakupedzisira. Zvishandiso izvi zvinongokubatsira iwe kuti zvisvike kuvanhu vakawanda.
Nekudaro hazvifanirwe kuti zvinhu izvi zvinyatso shanda, kusvika kune vanhu vakawanda zviri nyore asi zvakaoma kuvaita muteveri wechigarire pane yako. evanhu vezvenhau Mapuratifomu se Instagram uye Facebook, saka kutenga vateveri kubva nzvimbo dzakanakisa ndechimwe chidimbu chikuru chekuchengetedza huwandu hunodiwa hwevateveri.